कस्टम डिजाईन बोतलहरू, भोडका बोतलहरू, व्हिस्की बोतलहरू - चेf्गफेg
हाम्रो गिलासवेयरले सफा र सफा जीवनको लागि योगदान दिन्छ!
हावा यात्रा यात्रा, एकता र प्रगति, धार्मिकता र लाभ सँगै, जिम्मेवारी-लिने!
मध्य-उच्च-गिलासवेयर अनुकूलनको उद्योग पायलट बन्न, निजीकृत अनुकूलनमा भिन्नता ल्याउन, र हाम्रो ब्रान्डलाई अधिक मूल्यवान बनाउन!
50ml० एमएल लिकर ग्लास बोतल
हामी तपाईंको विस्तृत आवश्यकता अनुसार डिजाइन र कुनै पनि प्रकारको गिलास मदिरा बोतलहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। मिनी मदिरा बोतलहरू ml० मिलिदेखि १.L एलसम्म र liquor्कि। मदिरा बोतल आकारहरू, र क्याप, स्क्रू माथि, र कोर्क्सको बीचमा छनौट, यसको मतलब तपाईं सानो अर्डर मात्राको साथ तपाईंको ब्रान्डको लागि एक अद्वितीय गिलास मदिरा बोतललाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
5050० एमएल डबल-वाल लिकर ग्लास बोतल
फायरि,, डिक्ल्याaling, रेशम स्क्रिन प्रिन्टि,, ईन्चि,, स्यान्डब्लास्टि,, इन्क्रिभिंग, कलर कोटिंग, ग्लास फ्रोस्टिंग, प्याट-सर्पेट, सुन र बाहिरी रूपरेखामा रूपरेखा।
300 मिलीलीटर वाइन गिलास
स्टेमलेस एरेटिंग वाइन ग्लासले वाइन गिलास डिजाइनमा मुख्यधाराको चलनमा कार्यक्षमता ल्याउँदछ। पूर्ण रूपमा हस्तलिपि बनाइएको, यो प्याटेन्टेड पोतले तपाईंको मदिरा वा आत्मालाई वातित गर्न वास्तवमै अद्वितीय र रमणीय तरीका प्रदान गर्दछ। सिसाको मध्य भाग भित्र स्थिर वातन सेल मा सीधा राख्नुहोस्। वाइन मार्फत झारिनेछ, परिणाम स्वरूप7ओरेटित वाइनको रक्सी जुन तपाईंको प्यालेटलाई खुशी पार्न तयार छ। वायुवाहकमा बरफको ब्लक प्रयोग गर्नुहोस् श्वेत वाइन, व्हिस्की वा कोग्नाकलाई चिसो पार्नको लागि। Dishwasher सुरक्षित।
गुआंगज़ौ चेng्ग फेंग ब्रदर्स इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड एक अभिनव उद्यम हो जसले मध्य-अन्तको गिलासवेयरको निर्माण, डिजाईन र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गर्दछ। हाम्रो उत्पादन प्रकारहरूमा वाइन वर्ग प्रचार उपहार चश्मा, वाइन श्रेणी गिलास बोतल, गिलास पानी बोतल, गिलास खाना जार, र अन्य समान परिदृश्य गिलास उत्पाद सामेल छन्।
हाम्रो कम्पनी गुवाzhou्झो चीनमा अवस्थित छ, सुविधाजनक ट्राफिक र द्रुत रसदको साथ, तपाईं रेल, वायु, समुद्री कन्टेनर र भूमि परिवहनको बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्थान हुआang्पु र नन्शा पोर्टको नजिक छ, कन्टेनरहरूद्वारा सामानहरू संसारभरका ठाउँहरूमा पठाउन सकिन्छ। हामी मध्यम टिम गिलासवेयर उद्योगमा पेशेवर टीम, शक्तिशाली व्यवस्थापन र उद्योग अग्रणी उपकरणहरूको साथ विश्व स्तरीय नवीन ब्रान्डहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछौं।